Alaamuddiinii fi Dr. Abiy-Alaamuddiin nama qabeenya Oromoo kan ofii saamee fi kan Wayyaaneen saamtellee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAlaamuddiinii fi Dr. Abiy-Alaamuddiin nama qabeenya Oromoo kan ofii saamee fi kan Wayyaaneen saamtellee
Alaamuddiinii fi Dr. Abiy- Alaamuddiin nama qabeenya Oromoo kan ofii saamee fi kan Wayyaaneen saamtellee alatti dabarsaa ture akka ta’e hubannoo qabu irraa natti fakkaata. Qabeenyi biyyattii hedduun sarara isaa hordofee alatti dhokfame. Warqiin inni oomishu walii galtee Wayyaaneetiin too’annaa tokko malee dirree xiyyaara Booleetti imalee biyya alaatti fe’amaa ture. Kuni kan ta’uu danda’eef faayidaa isaan waliin waan qooddataniif malee tolaan hayyama akkasii hin kennineef Wayyaaneen. Sababuma kanaaf gara Wayyaanee goree Oromoo miidhuun isaa ni yaadatama.
Garuu, hattuu qabeenya namaa saamte tokko yoo hin qabamne ykn hatticha hin arganne, bakka itti meeshaa hate dhokfate beekuun rakkisaadha.
Karoora Dr. Abiy dhiheenya dubbatetu jira. Innis qabeenya saamamee alatti dhokfame hordofaa jiraachuu isaati. Qabeenyi kun irra guddaan Alaamuddiintu alatti dabarse. Nama kana argachuun adeemsa kanaaf waan fayyadu qabaachuu mala.
Kana booda Alaamuddiin biyyatti deebisee akka amma duraa akka saamu haala mijeessuufii laata? Natti hin fakkaatu.
Dr. Abiy akka walgahii ministeerota fi hoggantoota olaanoo waliin dheengadda marii geggeessetti, nama baasii waan hin barbaachifneef hanqisuuf jecha aangawoota ala deemuuf isa gaafatan hayyama dhoorgate ta’uu hime. Dabalataanis maallaqa alatti dhokfame deebisuuf tattaaffiirra jiraachuu hime. Hattummaa yeroo hedduu balaaleffata. Keessa dabree “hattuu nu hin eeginaa waajjira keessaa ari’aa” jedhee hogganaa hawaasa Baalee Roobeetti dubbatu; TV irratti tamsa’e. Haasawa isaarraa kaanee yoo madaalle tasuma nama hanna hayyamu hin fakkaatu.
Kanaaf, Alaamuddiin yoo kan barbaadu ta’e qabeenya san hordofuuf ta’a jedheen yaada. Barbaaduu isaatis odeeffannoo hin qabu. Kuni tilmaama kiyya. Wantoota akkanaa faayidaa fi miidhaan isaa tilmaama keessa galchiinee yaada dhiheeffachuu wayya.
Namni Oromoof yaadu kan saaminsa Alaamuddiin barbaadu yoo jiraate nama dantaa dhuunfaa isaa hordofu qofa jedheen yaada. Saniin ala tooftaan barbaachisaa. Qabeenya hedduu saamamne. Qaroominni qabeenya keenya itti deebifannu nu barbaachisa. Yeroo hunda miira aarii qofa hordofnaan tooftaa fayyadamuun rakkisaa ta’a.